भ्र’ष्टा’चारको मु’द्दा लागेका चतुर्वेदीले किन गरे ‘आ’त्म’ह’त्या’ ? – Sadhaiko Khabar
भ्र’ष्टा’चारको मु’द्दा लागेका चतुर्वेदीले किन गरे ‘आ’त्म’ह’त्या’ ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन २१, २०७८ समय: २०:४४:२५
काठमाडौं, २१ असोज / तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका प्रमुख रामाज्ञा प्रसाद चतुर्वेदीले ४ तल्लाबाट फा’ल हा’लेर ‘आ’त्म’ह’त्या’ गरेका छन् । उनी बिहिबार ८ तल्ले भवनको मुनी मृ’त फे’ला परेका थिए ।
प्रह’रीले चतुर्वेदीको मृ’त्युबारे प्रार’म्भिक अनुस’न्धानका क्रममा आ’त्म’ह’त्या गरेको पत्ता लगाएको छ । सीसीटीभी फुटेजमा उनी आफै फा’ल हा’लेको देखिएको प्रह’री स्रोतले जनाएको छ ।
चतुर्वेदी भ्र’ष्टाचार मु’द्दामा दो’षी ठ’हर भई जे’ल समेत परेका थि’ए । तत्कालीन प्रधानन्या’याधीश खिलराज रेग्मी र न्या’याधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इज’लासले चतुर्वे’दीलाई दो’षी ठ’हर गरेपछि २ वर्ष जे’ल स’जाय भएको थियो । उनीमाथि झण्डै २ करोडको जरि’वानाको फै’सला समेत गरिएको थियो ।
अ’कुत सम्प’त्ति मु’द्दामा चतुर्वेदीमाथि मु’द्दा दा’यर भएको थियो । उनले सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सकेका थिएनन् ।
२०५९ सालमा चतुर्वेदी वि’रुद्ध अ’ख्तियारले अ’कुत सम्पत्तिको मु’द्दा हा’लेको थियो । उनलाई त्यतिबेला ७ करोड घो’टाला गरेको आ’रोपपत्र थियो । मु’द्दा सर्वो’च्च अदा’लतसम्म पुगेर २०६८ मा जे’ल स’जाय तो’किएको थियो ।
सामाजिक प्रति’ष्ठामा आँ’च पुग्नेगरी भ्र’ष्टाचारमा दो’षी ठ’हरपछि चतुर्वेदी जे’ल स’जाय भो’गेर छु’टेका थि’ए । त्यसपछि सामान्य जी’वनमा फ’र्कने प्रया’स गरेपनि उनी डि’प्रेसनमा गएको बुझिएको छ । रिपो’र्टर्स नेपा’लबाट ।